Ngubani ozobhekana nemiphumela emibi kakhulu yokuguquguquka kwesimo sezulu? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuguquka kwesimo sezulu akuthinti zonke izingxenye zomhlaba ngendlela efanayo. Isimo semvelo ngasinye nendawo ngayinye yeplanethi inakho izici, isimo sezulu salo kanye nokulingana kwabantu. Ngakho-ke, umbuzo ophambi kwethu yilokhu: ngubani ozohlupheka ngezimbangela ezimbi kakhulu zokushintsha kwesimo sezulu?
Uma ufuna ukuthola ukuthi ngubani ozobhekana nemiphumela emibi kakhulu, funda ku.
1 Imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu
2 Ukulingana ngezinyawo?
3 Izixazululo zenkinga
E-Bihar (India), amathuba okuhlupheka izikhukhula ziphezulu, unikezwe i-morphology yendawo kanye nemvula eningi nemvula enkulu. Umnotho wabo usekelwe ekutshalweni futhi kulokhu bayakwazi ukondla imindeni yabo. Njalo ngonyaka, izimvula zemvula zifika lapho imifula ikhuphuka futhi isongele ngokucekelwa phansi kwezitshalo, kepha noma kunjalo, bazimisele ukubeka engcupheni yokusinda kwemindeni.
Imvula igcine icekele phansi i-izitshalo nezindlu kwakungamanxiwa. Ngenxa yalesi simo, babalekela emadolobheni ukuyofuna imisebenzi esezingeni eliphansi. Lapho kufika unyaka olandelayo, babuya bempofu kakhulu kunalokho ababevele benakho, kodwa sebelungele ukutshala futhi.
Futhi ukuthi laba balimi abalungele noma yimuphi umcimbi wemvelo, mhlawumbe obangelwa ukuguquguquka kwesimo sezulu, njengesomiso, izikhukhula noma ukusabalala okukhulu kwezifo. Laba balimi abakwazi ukumelana nezinto ezifana nalezi, ngoba abazisebenzisi ayikho imbewu emelana nayo, akukho manyolo noma ukubulala ukhula okubavikela ezimweni ezimbi kakhulu.
Ukwanda kwamazinga okushisa okubangelwa ukuguquka kwesimo sezulu kuzokwenza indlela yabo yokuphila ibe nzima kakhulu. Ukuguquka kwesimo sezulu kuzonyusa kakhulu isomiso noma izikhukhula, kuvimbele ukuthi izitshalo zikhule, ikakhulukazi ezindaweni ezishisayo. Futhi, ngamazinga okushisa aphezulu, izinambuzane zingasakazeka kangcono ezindaweni ezifudumele futhi zibulale izitshalo.
Akunakuphikwa ukuthi amazwe acebile nawo azobhekana nemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu, ngoba izothinta wonke umuntu. Kodwa-ke, amazwe athuthuke kakhulu anezinsizakusebenza ezidingekayo ukuze akwazi ukugwema ukuthanda okufanayo futhi akwazi ukuzivumelanisa nawo. Ngokungafani nabo, abalimi abampofu kakhulu abanawo la mathuluzi angasiza ukujwayela ukumelana nokushintsha kwesimo sezulu. Ngakho-ke, bangabantu abazohlupheka kakhulu kule miphumela.
Lezi zindawo zizohlupheka kakhulu ngemiphumela yokuguquguquka kwesimo sezulu, impela lapho umhlaba uzodinga usizo lwakho kunanini ngaphambili ukondla abantu abaqhubeka bekhula. Isidingo sokudla sikhula njalo njengoba kwenza abantu emhlabeni. Kulinganiselwa ukuthi isidingo sizokhula ngo-60% ngo-2050.
Ukudla emhlabeni wonke kuyinto ebalulekile okufanele ikunakekele futhi ukwehla kwayo kungabeka bonke abantu esimweni. Indlala ingakhuphuka futhi inqubekela phambili eyenziwe ngumhlaba emashumini eminyaka adlule yokulwa nobuphofu ingahle yehliswe.
Yize yonke into ibonakala imnyama kakhulu, kunezisombululo ezincike kakhulu ezinqumweni zohulumeni. Kumele batshale amandla ahlanzekile, ekusebenziseni amandla kagesi ukuze ukunciphisa ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa futhi wehlise ijubane lokhu kukhuphuka kwamazinga okushisa.
Akunakwenzeka ukugwema imiphumela yokushisa komhlaba manje ngisho noma siqala ukusebenzisa amandla ahlanzekile kuphela. Kuyinto eyinkimbinkimbi ukushiya imikhuba yokusebenzisa okokubasa.
Kepha akuzona zonke izindaba ezimbi. Kunamathuluzi adingekayo futhi okulula ukuwaguqula. Bangasiza ku- ukukhiqizwa kokudla, ukuthola imali engenayo, njll. Lokhu kumayelana nokwenza ngcono ukufinyelela kwezezimali, ukuthola imbewu ethuthukisiwe ezimweni ezingezinhle, umanyolo ongangcolisi kakhulu futhi uthengise lapho bengathengisa khona konke abakutshalayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ngubani ozobhekana nemiphumela emibi kakhulu yokuguquguquka kwesimo sezulu?